JAMAAME, Soomaaliya - Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africa [AFRICOM] ayaa shaaciyay Duqeyn kale oo lagu dilay xubno katirsan Al Shabaab oo ay ka fuliyeen Koonfurta dalka Soomaaliya.
Qoraalka ay soo saartey AFRICOM ayaa lagu sheegay in Duqeyntan oo dhacday 21-ka bishan ay ka fuliyeen degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose, iyadoo lagu dilay afar kamid ahaa Al Shabaab.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay dhanka kale in qiimeyn ay sameeyeen ku ogaadeen Sirdoonka Mareykanka inaysan jirin wax khasaaro, oo Duqeynta kasoo gaarey dadka shacabka ah ee ku nool Jamaame.
Diyaarad nooca aan duuliyaha laheyn [Drone] ay geysatay weerarka, oo noqonaya midkii labaad oo mudo labo maalmood gudahooda Ciidamada Mareykanka ka fuliyeen Koonfurta dalka Soomaaliya.
Duqeyntii hore ayaa ka dhacday duleedka degmada Jilib, oo ah saldhiga ugu weyn Al Shabaab ee gobolka Jubbada Dhexe 19-kii bishan, taasi oo lagu qaarijiyay saddex dagaalyahan.
Ciidamada Mareykanka ee ka howlgala Africa ayaa 5 weerar oo cirka ah ka geestay Soomaaliya tan iyo inta uu billowday sanadkan 2018-ka, iyadoo 2017 ay fuliyeen in ka badan 35 duqeyn, oo mid lala eegtay Daacishta ku sugan Puntland.
Dowladda Mareykanka ayaa qiyaastii 500 oo Askari ka jooga Soomaaliya kuwaasi oo ka caawiya Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM howlgallada gaarka ah ee lagu qaado goobaha Al Shabaab.
Mareykanka ayaa Hal Askari oo katirsana kuwa sida gaarka u tababaran ee Navy SEAL looga dilay bishii May, ee sanadkii 2017 deegaanka Bariire, ee gobolka Shabeellaha hoose, isagoo ka qeybgalayay Howlgal gaar ah oo lagu qaaday Al Shabaab.